नयाँ बानेश्वरमा क्रेनले उचालेर राखियो आकाशे पुल (फोटो फिचर) « Etajakhabar
नयाँ बानेश्वरमा क्रेनले उचालेर राखियो आकाशे पुल (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको अति व्यस्त चोकमध्येको एक नयाँ बानेश्वर चोकमा आकाशे पुल बुधबार क्रेनको सहायताले खम्बामा चढाइएको छ । भुइँमा जडान गरिएको पुल बुधबार क्रेनको सहायताले सडक किनारको खम्बामा चढाइएको छ ।
संघीय संसद् भवन नजिकैको चोकमा कार्यालय समयमा र साँझको समयमा बाटो का’ट्ने यात्रीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । बुधबार अपरान्ह भुइँमा बनाइएको फलामको ट्रस्टलाई आकाशेपुलको पिल्लरमा जोडिएको छ ।
बानेश्वर चोकबाट पश्चिमतर्फ ५० मिटरको दुरीमा रहेको यो पुलले दैनिक १५ हजार जना व्यक्तिलाई वारपार गर्न सहज बनाउने बताइएको छ । यस्तै भुइँमा सडक ट्राफिकलाई समेत सहज बनाउने छ । ३८ मिटर लम्बाईको यो पुल मान्छे मात्र वारपार गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ ।
करिब ३ करोड १० लाख रुपैयाँ लागतमा पुल बन्न लागेको हो। काठमाडौंको सबैभन्दा व्यस्त मानिएको बानेश्वरमा आकाशे पुल बनेपछि सवारी जाम नियन्त्रण गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ। आकाशे पुल नयाँ बानेश्वर चोकदेखि पश्चिमतर्फ करिब ५० मिटर क्षेत्रमा बनेको छ। तस्विर गोरखापत्र
बाहिरियो पुरै भिडियो : पानीले उनको पुरै खुटा भिजि सकेको रहेछ ! सेती नदीमा जानु आघि दुई साथीहरुलाई यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन् ! (भिडियो)
यस्तो अनौठो कारण देखाउदै दक्षिण भारतीय फिल्मकै सुन्दर जोडी सामन्था र नागा चैतन्यको डिर्भोष हुँदै !
घटनाको अघिल्लो रातभर सुतेका थिएनन् अभियुक्त कार्की
राजकुन्द्रा बारे फेरी लियो शिल्पासंग प्रहरीले बयान: शिल्पाले भनिन्, ‘मलाई उनको कामको कुनै चासो र सरोकार छैन’
एजेन्सी । अ श्ली ल भिडिओ बनाएको आरोपमा प्रहरी थु ना मा रहेका राज कुन्द्राका
‘मलाई धोका दिएर गएका १० भाईलाई अपमान नगर्नुस्’
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले काठमाडौको मिनभवनमा नयाँ पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरे
कार्ड छापेर बेहुली बनिसकेकी संगिताले आखिर किन सलमानसंग विवाह गर्दिन भनिन् ? बल्ल खुल्यो रहस्य
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानको विवाहको चर्चा अहिले पनि चलिरहन्छ । ५० वर्ष
एजेन्सी । कहिले काँही अदालतले दिने असामान्य फैसलाले मानिसलाई हैरान बनाउँछ । जस्तो फैसलाको कल्पना
सुरक्षा निकायहरूमा जागिर खान इच्छुक किशोरकिशोरीको आकर्षण बढ्यो , ५ हजार मागमा झण्डै १ लाख आवेदन
रामकुमारी झाँक्री कहाँ हराईन ?